ရောဂါကင်းစင်သော ရေငန်ပုစွန်ကျားကို ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွင်စတင်ထုတ်လုပ်
(Specific Pathogen Free Tiger Shrimp)
၅နှစ်ကြာသုတေသနပြုမှု အပြီးမှာတော့ရောဂါကင်းစင်တဲ့ ရေငန့်ပုစွန်ကျား (Penaeus monodon) ကိုမွေးကန်ကနေ ၄၀ဂရမ် အရွယ် ၇တန်/ဟက်တာနှုန်းနဲ့အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီလို့ ဘရုနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေငြာသွားကြောင်း ကို BobrosernbeyShrimp news က အင်တာနက်မှာဖေါ်ပြသွားပါတယ်။မွေးကာလ ၁၃၆ရက် ကြာမြင့်ပြီးတော့ FCR 1.45 သာရှိကြောင်းလဲ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ကန်ဖေါ်ကုန်ထုတ်ခြင်းကိုတော့ Automated machine နဲ့ပြုလုပ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ ရေငန်ပုစွန်ကျားမွေးမြူ ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံများအတွင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းလဲဖေါ်ပြသွားပါတယ်။
သုကေသနပြုမှုနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုပူးတွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Integrated Aquaculture International (IAI) ရဲ့ ဒါရိုက်တာGeorge Chamberlain, က FCR 1.5 အတွင်းသာရှိပြီးအရွယ်ကြီးတဲ့ပုစွန်ကိုရရှိတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံကိုတော့ George Chamberlain, Integrated Aquaculture International, 5661 Telegraph Road, Suite 3A, St. Louis, Missouri 63129, USA (1-314-293-5500, fax 1-314-293-5525, email georgec@integratedaquaculture.com, webpage http://www.integratedaquaculture.com). ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Patrick Wood (patrickjwood@yahoo.com): သဘာဝမျိုးလား ဒါမှမဟုတ် domesticated stocks မျိုးပြုပြင်ထားတဲ့ အမျိုးအစားလားလို့မေး ထားပါတယ်။
Alex Wong (alexwongnl@yahoo.com): သူတို့ကသဘာဝမျိူးကို စစ်ယူထားတာလို့ပြောပါတယ်။
Jim Wyban (jim.wyban@gmail.com): က Alex နဲ့ Patrick ကို , Hawaii Kona မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ ကုမ္ပဏီHigh Health Aquaculture, မျိုးပြုပြင်ထားတဲ့ SPF P. monodon ကို ၁၉၉၆ခုနှစ်ထဲကဖြန့်ဖြူးနေတာ အခုဆိုရင် မျိုးဆက်(၁၁)ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်။
Patrick Wood (patrickjwood@yahoo.com): ကAlex, ကိုပြောရာမှာတော့ ဘရူနိုင်းဟာ ပုစွန်သားဖေါက်ခြင်း ကို ရောဂါကင်းစင်တဲ့ သားပေါက် ရရှိတယ်ဆိုတာ အမှန်တကယ်ရတာ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့နားလည်ရန် ခက်ခဲတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Alex Wong (alexwongnl@yahoo.com): ကမင်းပြောတာကိုသဘောတူတယ်၊ ဘရူနိုင်းကုမ္ပဏီက သဘာဝမျိုးပုစွန်တွေ ကို ရောဂါ သုတေသန ပြုဖို့အတွက် စုဆောင်းခဲ့တာပါ။ ရရှိတဲ့သားပေါက်တွေကို (HDPE, high density polyethylene) ခင်းထားတဲ့ကန်ထဲမှာ အလိုလျောက် အနယ်အနှစ်များကိုရှင်းပေးတဲ့ စက်များတပ်ဆင်ပြီးမွေးတာ ကုန်ကျစရိတ်အလွန်မြင့်တာပါ။ ဘရူနိုင်းအစိုးရဟာ ငွေကြေးအမြောက်အများ သုံးစွဲခဲ့တာပါ။ အမြတ်အစွန်းရရှိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီမွေးမြူရေးစနစ်ရဲ. ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကို ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီမွေးမြူရေးစနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးလိုတာလေး ရှိပါတယ်၊ အဲဒါက သူတို့အမှန်တကယ် ရောဂါကင်းစင်တဲ့ သားပေါက်ကို ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလား?၊ သူတို့သားပေါက်ထည့်စဉ်တုံးက ရောဂါပိုးရှိတဲ့ရေမှာ ထည့်တာလား? သူတို့ရလဒ်ကောင်းကိုရခဲ့ရဲ့လား?
၂၀၁၀ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပုစွန်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေး ၏ နိုင်ငံအလိုက်ထုတ်လုပ်မှု
Aquafauna Bio-Marine က ကမ္ဘာ့ပုစွန်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေး ၏ နိုင်ငံအလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကို ၁၂.၀၂ ၂၀၁၂ တွင်ဖေါ်ပြခဲ့မှုကို Bob Rosenberry (bob@shrimpnews.com) ကဖေါ်ပြထားတာကို ပြန်လည်းတင်ပြထားတာပါ။